७५ लाई फर्केर हेर्दा : फुटबल छाएको बर्ष - Khelpati
७५ लाई फर्केर हेर्दा : फुटबल छाएको बर्ष
आइतवार, बैशाख १, २०७६ रमेश सुवेदी
साफ च्याम्पियनसिपमा महिला खेलाडी । फाेटाे : एन्फा ।
काठमाडौं । खेलकुदमा चर्चा र विवाद एक अर्काको पर्याय हुन् । सायद विवाद नहुदो हो त, चर्चा पनि हुदैन थियो होला ।
गएको बर्ष नेपाली फुटबल फेरी एक पटक चर्चामा रह्यो । संगै विवादका श्रृङ्खला समेत जोडिएर आए ।
तर नेपाली खेलकुदमा गएको बर्ष फुटबलको बर्ष भन्दा अन्याय हुने छैन ।
मैदान भित्र र बाहिरको चर्चाले फुटबललाई घरेलु खेलकुदको केन्द्रमानै राख्यो ।
सुरु मैदान बाहिरबाट गरौ ।
नेपाली फुटबल गएको बर्ष एक ठुलो परिवर्तनको साक्षी बस्यो । करिब दुई दशक एन्फाको नेतृत्व गरेका गणेश थापालाई विस्थापित गर्दै फुटबलको बागडोर सम्हाल्न कर्माछिरिङ शेर्पा आईपुगे ।
परिवर्तन र पारदर्शीताको नारा सहित उनले घरेलु फुटबलको नेतृत्वमा आफुलाई स्थापित गर्न सफल भए ।
तर उनको आगमनसंगै एन्फाभित्रको शक्ति संर्घष पेचिलो बन्यो । मानार्थ अध्यक्षको रुपमा एन्फा छिरेका टासी घले र अध्यक्ष शेर्पाबीचको लडाईले एन्फामा सुरुमै विभाजन रुप देखा पर्यो ।
विवादले उग्र रुप लिएपछि अध्यक्ष शेर्पाका चुनावी ‘किंगमेकर’ टासीले एन्फा जान बन्द गरे ।
मानार्थको कुर्सीबाट अघि बढ्न खोजेका टासीको व्यवहार कर्मालाई सायद मन परेन । टासीलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दै कर्माले फुटबल गतिविधि अगाडी बढाउदै लगे । त्यसैको प्रतिशोधको रुपमा टासीले चुनावी प्रक्रियामा भएका लेनदेनका बिषय बाहिर सार्वजनीक गरिदिए ।
भलै टासी सो बिषयमा आफु जानकार नभएको दाबी गर्छन । तर चुनावको समय भएका आर्थिक लेनदेनको बिषयलाई बाहिर सार्वजनीक गरेर कर्मालाई दबाबमा राख्ने टार्सीको रणनीति ओपन सेक्रेटनै थियो ।
लगत्तै असन्तुष्ट चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फा नेतृत्वविरुद्द आन्दोलनको घोषणा गरे । चुनावको समय फरक कित्तामा उभिएका चार जिल्ला फुटबल संघले एन्फा भित्र चरम आर्थिक अनियमितता भएको र निर्वाचनमा ठुलो रकमको चलखेल भएको आरोप लगाए । उनीहरुले विभिन्न निकायमा गएर घटनाको छानबिन गर्न दबाब दिए ।
लगत्तै खेलकुद मन्त्रालयले एन्फा भ्रष्टाचारको बिषयमा छानविन गर्न समिति गठन गर्यो । र अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान प्रतिबेदन बुझायो । अख्तियारले सो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान अघि बढाउँछ वा प्रमाण नपुगेको भन्दै तामेलीमा राख्छ, मुख्य चासोको बिषय छ । तर एमालेका केही खेलकुद पदाधिकारी अख्तियारले थप छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब बालुवाटारमार्फत अख्तियारमा दिईरहेका छन् ।
यो त भयो फुटबल राजनीतिको एउटा अंश ।
तर अर्को मुख्य बिषय भनेको परिवर्तनको नारा सहित एक ढिक्का भएर चुनाव लडेका एन्फा कार्यसमितिका पदाधिकारीनै विभिन्न समुहमा विभाजित छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव फुटबल विकासमा देखिएको छ ।
विभिन्न घुर्की देखाएर नेतृत्वलाई गलाउने र त्यसबाट व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ती गर्ने पुरानै रोग एन्फाभित्र अझै मौलाएको छ । यसको विस्तृत कथा एक दिन लेखिनेनै छ । तर फुटबल राजनीतिले गएको बर्ष नेपाली खेलकुद पुन एक पटक तरंगित बन्यो । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको नेतृत्वको कुर्सीलाई सिंहदरबार र बालुवाटारलाई निरन्तर ‘थ्रेट’ आईरह्यो ।
त्यसका परकम्पनहरु नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक पटक देखिए । जसले फुटबल राजनीतिलाई पुन एक पटक चर्चामा ल्याउने काम गर्यो ।
अब कुरा मैदान भित्रका ।
कर्माछिरिङ शेर्पा एन्फा नेतृत्वमा आए लगत्तै विवादका बीच फुटबलका गतिविधिले व्यापकता पाए । रेलिगेशन बिनाको लिग सञ्चालन गर्ने उनको निर्णयको निर्मम समिक्षा ईतिहासले गर्नेनै छ । तर पाँच बर्षदेखि अवरुद्द घरेलु फुटबलले गति लिने काम गर्यो ।
पुरुष फुटबलसंगै महिला फुटबलका गतिविधि सञ्चालन भए । महिला फुटबलको अन्तराष्ट्रिय सहभागिता बढ्न पुग्यो । उमेर समुहमा महिला फुटबलले धेरै अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो । सिनियर टिमले समेत राम्रो तयारी गरेर ओलम्पिक छनोट हुँदै साफ च्याम्पियनसिपमा गर्विलो प्रर्दशन गर्न सफल भयो ।
सात्रिता भण्डारी, अनिता बस्नेतले भारतीय लिग खेल्ने निश्चित भएको छ । गिता राना भुटानी लिगमा जाने पक्का भएको छ । यसको प्रभाव आगामी दिनमा महिला फुटबलमा देखिनेनै छ ।
घरेलु लिगको सुरुवातसंगै विदेशीएका धेरै फुटबल खेलाडी स्वदेश फर्किए । अमिर श्रेष्ठदेखि शिव श्रेष्ठ त्यसको गतिलो उदाहरण हुन । गत बर्ष फुटबलमा भएको गतिविधिले नेपाली खेलकुदमा आशाको सञ्चार गराउन सफल भएको छ । यसले कुन बाटो तय गर्छ, नयाँ बर्षले त्यसको स्पष्ट चित्र देखाउनेनै छ ।
गएको बर्ष फुटबलमा केही सकारात्मक कामको थालनी भएका छन् । फुटबल संघले आर्थिक नियमावली र कार्यविधि लागु गरेको छ । फुटबल संघमा देखिएको आर्थिक अनियमितता र बिसंगतिलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
एन्फाका सदस्य जिल्लामा सञ्चालन गरिएको ग्रासरुट कार्यक्रमदेखि फुटबलमा स्थानीय सरकारलाई सहभागि गराउने एन्फा रणनीतिको दुरगामी फाईदा नेपाली फुटबलले पाउनेछ ।
घरेलु फुटबलका केही मुख्य गतिविधि ।
१, ललित स्मृति यू-१८ प्रतियोगिता : जेष्ठ २९ असार २१ सम्म । ब्रिगेड ब्वाइज क्लब विजेता ।
२, महिला नकआउट प्रतियोगिता : पहिलो चरण असार २७ देखि साउन ३ सम्म । दोस्रो चरणमा काठमाडौँ र रौतहट छनोट ।
३, महिला लिग : साउन ६ देखि १५ सम्म । विजेता एपीएफ क्लब ।
४, सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग : असोज १३ देखि पौष २४ सम्म संचालन । कीर्तिमानी आठौ पटक मनाङ च्याम्पियन ।
५, सहिद स्मारक बी डिभिजन लिग : माघ २५ देखि फागुन २१ सम्म । आरसिटी विजेता ।
६, सहिद स्मारक सी डिभिजन लिग : फागुन २२ बाट सुरु । खालीबारी च्याम्पियन ।
२०७५ सालमा अन्तराष्ट्रिय खेलहरु :
१, एसियन गेम्सका लागि राष्टिय फुटबल टिमको थाइल्याण्डमा तयारी साउन ७ देखि ११ सम्म ।
२, १७ औँ एसियन फुटबल गेम : साउन २९ देखि भदौँ ३ सम्म इन्डोनेशिया ।
३, साफ यू १५ महिला च्याम्पियनसिप सन् २०१९ : साउन २४ देखि भदौँ २ सम्म भुटान । नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिर ।
४, साफ सुजुकी कप २०१९ : भदौ १९ बाट ३० सम्म, बंगलादेश । सेमिफाइनलबाट बाहिर ।
५, एएफसी यू १६ च्याम्पियनसिप २०१९ क्वालिफायर : असोज ३ देखि ७ सम्म काठमाडौँ । नेपाल समुह चरणबाटै बाहिर ।
६, एशियन यू १८ स्कुल फुटबल प्रतियोगिता : सन् २०१८ आश्विन ४ देखि १३ सम्म, भारत । छैठौँ स्थानमा रहेर प्रतियोगिता समापन
७, साफ यू १८ महिला च्याम्पियनसिप असोज १२ देखि २१ सम्म भुटान : नेपाल उपविजेता ।
८, बंगबन्धु गोल्डकप असोज १५ देखि २६ सम्म बंगलादेश : नेपाल समुह चरणबाट बाहिर ।
९, साफ यू १५ च्याम्पियनसिप : कार्तिक ८ बाट १७ सम्म काठमाडाै । सेमिफाइनलबाट बाहिर ।
१०, एएफसी यू १९ महिला च्याम्पियनसिप क्वालिफायर : कार्तिक ६ देखि ११ सम्म थाइल्याण्ड । दोस्रो चरण प्रवेश ।
११, महिला राष्ट्रिय टिमको मैत्रिपुर्ण खेल : कार्तिक ११ देखि १४ सम्म चीनमा ।
१२, ओलम्पिक छनोट पहिलो चरण महिला : कार्तिक २२ देखि २७ सम्म म्यानमार । पहिलो चरण पार ।
१३, हिरो महिला गोल्डकप : माघ २४ देखि फागुन ५ सम्म, म्यानमारसंग फाइनलमा पराजित ।
१४, महिला साफ च्याम्पियनसिप : फागुन २८ देखि चैत्र १० सम्म विराटनगर । फाइनल खेलमा पराजित ।
१५, एएफसी यू २३ च्याम्पियनसिप : मार्च २२ देखि २६ तारिक कतार । समुह चरणबाटै बाहिर ।
१६, महिला ओलम्पिक छनोट दोस्रो चरण : अप्रिल १ बाट ९ सम्म म्यानमार । दोस्रो चरणबाट बाहिर ।
फेरिएका भुमिका, बदलिएको जिम्मेवारी
ओली, सिलवाल अनि सदस्य सचिव !
'डाक्टरी' पढ्ने क्रिकेटर !
आर्मीको 'ब्यारेक'मा एन्फाको ग्रासरुट फुटबल
गौरिका हिट चरणबाट बाहिरिईन्